Umatshini wokukhuphela ibhokisi yomenzi wekati kunye nabathengisi - China Umatshini wokukhuphela ibhokisi yekati ngokuzenzekelayo
Inkqubela phambili yethu ixhomekeke kwiimveliso eziphambili, iitalente ezimangalisayo kunye nokomelela okuqhubekayo kwitekhnoloji yeBhokisi yeZinto eziZenzekelayo,,,, Abathengi bethu ikakhulu basasazwa eMntla Melika, eAfrika nase Mpuma Yurophu. sinokunikezela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngexabiso elinokhuphiswano kakhulu. Ngobuchwephesha bethu obukhokelayo ngaxeshanye nomoya wethu wokuyila izinto ezintsha, intsebenziswano, izibonelelo kunye nokuqhubela phambili, siya kwakha ikamva eliqaqambileyo kunye nomnye nenkampani yakho ehlonishwayo ye-Automatic Cat Litter Box, kwangoko kunye nengcali emva kwenkonzo yentengiso ebonelelwe iqela labacebisi linoyolo kubathengi bethu. Ulwazi oluneenkcukacha kunye neeparamitha ezivela kwintengiso ziya kuthunyelwa kuwe nakuphi na ukwaziswa okuqinisekileyo. Iisampulu zasimahla zinokuhanjiswa kwaye inkampani itshekishe kwinkampani yethu. n I-Morocco kuthethathethwano yamkelekile rhoqo. Ndiyathemba ukuba imibuzo uza kukuchwetheza kwaye wakhe intsebenziswano yexesha elide.
Uhlobo lweSutikheyisi yekati yangasese usebenzisa ulwakhiwo olusongekayo, ibhokisi yenkunkuma efakwe ngokupheleleyo inokugoqwa kwisutikheyisi, ekulungeleyo kakhulu ukugcina ekhaya okanye ukuyenza. IKhabinethi isebenzisa uyilo lweedrowa kwaye ixhotyiswe ngomhlakulo wenkunkuma yekati enobubanzi obulinganayo, eyenza ukuba kube lula ukuthatha ilindle lekati kunye nokucoca inkunkuma yekati. Xa isongelwe kwisutikheyisi, umzimba webhokisi unesiphatho esiphathwayo ukuze uphathwe ngcono. Emva kokuba imveliso ithe yatyhileka, inendawo enkulu enokuthwala iikati ukuya kuthi ga kwiikhilogram ezili-10, kwaye emazantsi ebhokisi yenkunkuma ayilelwe nonyango oluchasayo. Uyilo lwebhokisi iyonke luyilwe kakuhle, olunokuthi lubone inguquko efanayo ukusuka kwibhokisi yenkunkuma ukuya kwisutikheyisi kwimizuzwana emi-3.